Oovimba beGoldman Sachs
Udidi: Goldman Sachs
UGoldman Sachs ubhengeza ukumiselwa ngokusesikweni kweQela lokuRhweba nge-Cryptocurrency
Ukuhlaziywa: 9 May 2021
UGoldman Sachs ubhengeze ngememo yakhe yangaphakathi ebonwe kwi-CNBC ngolwesiHlanu ukuba uqokelele iqela lokuthengisa nge-cryptocurrency. Ngokwapapasho, eli iya kuba lithuba lokuqala ukuba ibhanki yotyalo-mali ibehemoth iqinisekise unxibelelwano nentengiso ye-cryptocurrency.
Imemo, enesihloko "Ukusekwa kweQela lokuRhweba ngeDijithali," Yaqanjwa nguRajesh Venkataramani, iqabane eGoldman Sachs.
UVenkataramani uqaphele ukuba wayenguye “Ndinovuyo ukubhengeza ukusekwa kweqela elishishina ngokuthengisa imali, ezakuba yidesika yethu esembindini yokulawula umngcipheko we-cryptocurrency kubaxhasi bethu.” Umphathi wabhala oko "Iqela lokurhweba nge-crypto liza kuba yinxalenye yeeMali zeHlabathi kunye neeMarike eziHlumayo (i-GCEM), inika ingxelo kum, ngaphakathi komzamo wenkampani ye-Digital Assets ekhokelwa nguMathew McDermott."
Iqabane leGoldman lachaza oko "Njengenxalenye yokuqaliswa kwethu kokuqala, siphumelele ngempumelelo i-bitcoin (BTC) ye-NDFs [engahambisi phambili] kunye ne-CME BTC yorhwebo lwexesha elizayo ngokusisiseko, ukuhlawulwa kwemali yonke," ichaza ukuba:
"Sijonge phambili, njengoko siqhubeka nokwandisa ubukho bethu kwimarike nangona kunjalo, ngendlela elinganisiweyo, sikhetha ukukhwela kubaboneleli abatsha bemalike ukuze basincede ekwandiseni ukunikela kwethu."
"Ukongeza, izolo sisungule ideshibhodi yethu yeeMpahla zeDijithali ebonelela ngeenkcukacha zentengiso yemihla ngemihla kunye neentsuku zangaphakathi kwi-intanethi kunye neendaba kubathengi bethu." Siyakumema ukuba ubonise ideshibhodi kubaxhasi bakho. ”
Nangona kunjalo, uVenkataramani uyicacisile loo nto "Ifemu ayikho kwimeko yokuthengisa i-Bitcoin okanye nayiphi na imali yedijithali (kubandakanya ne-Ethereum) ngokwasemzimbeni."
Uninzi lweeBhanki ziShukuma ngokubonelela ngeenkonzo ze-Crypto
Ixesha elizayo leBitcoin kunye nokungahanjiswanga phambili (NDFs) kuthengiswa yiGoldman Sachs kuhlawulwe ngemali. Iingxelo zibonisa ukuba i-bhanki yotyalo-mali esekwe eNew York ngokuchasene nokungazinzi kweBitcoin ngokuthengisa kwiqela le-CME kunye nokusebenza neCumberland DRW njengeqabane layo lokurhweba.
Okwangoku, ngaphandle kweGoldman Sachs, uMorgan Stanley naye waqala ngokunika ukubonakaliswa kweBitcoin kwinyanga ephelileyo. Nangona kunjalo, inkampani ibhengeze ukuba esi sithuthi sotyalo-mali sigcinelwe kuphela abathengi baso abazizityebi. Kwakhona, iCitigroup inamahemuhemu okuba isebenza kwisicwangciso senkonzo ye-crypto njengoko iibhanki ezininzi ziqala ukubonelela ngeenkonzo ze-crypto kunye nokuvezwa.
tags Cryptocurrency, IINTSHOLONGWANE ZASE GOLDMAN, iindaba, Trading